Senator John McCain,(bitaa) fi jaartii isaa Cindy MaCain duula filannoo pireizdaantummaa 2008 irratti.
Senator Joon Makkeeyin "qaroon akka billaachaa" ganna 81tti jaare,du'e nama waan hedduun faarsan
Joon Sindi Makkeeyin,jaarsii ganna 81 guyyaa dheengaddaa lubbuu dhabe. Nama pirezidanati tahuuf dorgome,nama biyya isaatiif jeetii fudahtee lole kurnya hedduu caalaa sentgera Ammerikaa tahee hojjachaa bahe.
Garuma deemutti jabeenna Amerikaa faarsa.“Itti gaafatama addunyaan bulchan diduu fi abdii tokkitti haftee ta herregatte taanee oduu warra maqaa biyyummaatiin dhara dhugaa fakkeessee waan biyyaa fala tahu ufi fakkeessu diduu malle.”
Makkeeyin lola US fi Vetnaam bara 1967 irratti jeetiin duule.Jeetii sun dhahanii buusanii boojihame.Mana hidhaa Vetnaamiitti hidhaa fi ulee ganna shan dandamatee senetera US godina Arizonaatii filatamee ganna 30 caalaa kongireesii Amerikaa keessa hojjate.
Ganna kurnya hedduun duubatti sentera tahee lafuma itti lolee fi itti boojihan, Vetnaam hujiif itti deebihe.Amerikaan hariyummaa Vetnaamiin waliin qabdu jabeeffattee akkuma durii akka wal jaalatanii fi VOAlleen waan durii lakkiftee waan ammaa dubbatu gaafate.
“Me hubadhi.Warra mana hidhaa keessatti waan naa hin malin na tolchetti jira.Sun ammoo waan itti deebihu hin sehu.Vetnaam ummata dansaa,hariyaa dansaa qabdi.Wal jaalannaa jechuu wannii nu dhowwaa hin jirtu.”
Gaafa Al-Qaayidaan Amerikaatti nama kuma hedudu fixxe Fulbaana 11,2001 sunillee warra sunuun shakkanii qaban akka mana hidhaa sun keessatti akka isa tolchan hin tolchine gaafate.Hajaja Amerikaan Iraaqii fi Afgaansitaanittiin duulte ammoo ya deeggare.
Paartii Rippaabilikaan keessaa warra herrega qajeelaa qaba jedhaniin keessa jira.Tanumaaf bara 2008tti paartii Rippabilikaan fulaa bu’ee pirezidaantii tahuuf Obaamaa waliin dorgome.
Gaafa duula filannoo irratti ‘Obaamaan Ameirkaatti hin dhalannee Arabaa dhufee’ jedhanii duula flannoo irratti itti himanillee...’iyyoo iyyoo waan akkasi yaalaa bahi.Obaamaan nama Amerikaati abbaa warraa qalbii qabullee,’ jedhee mormeef.
Dorgommii gaafasii moohamullee hujuma Sentetiitti deebihee itti gaafatamaa koree waraana Amerikaa tahee hojjacahaa bahe.
Joon Makkeeyinii fi pirezidaanti Tiraampi waan hedudu irratti walii hin galle. Makkeeyin nama duula irratti qabamee boojihame.
“Waan boojihameef jabaa biyyaa tahee?Ani warra hin qabamnin ykn hin bojamin jaalaadha.Isanii galtee? Garuma jabaadhee jedha,” jedhe Tiraampi.
Makkeeyin akka Tiraampi biyya itti bulchu jiru hin jaalatu.Caasaa fayyaa Amerikaa Tiraampi ka Obaamaan baase jissee ka ufii baasuuf itti duulellee maqaa Makkeyiniitiin irraa jige.
Itti aanaan pirezidaantii US,ka durii Joe Bidenii fi namii paartii Demokiraati hedduun Makkeeyin guddoo jaalata.
“Namii lubbuu isaa ulfeessuuf galgala kana walti dhufneef kun “Jabaa fi nama itti hirkatan” jaala kiyya kana,joon Makeeyiin maqaa dhibii yaamuun hin qabu.”
Allan Litchman ogeessa seenaa siyaasaa Amerikaati.“Joon Makkeeyin abbootii siyaasaa dhiyootti beennu cufaa caalaa nama yaada siyaasaa paartilee caqasee karaa biyya durattiin deeman itti barbaadu.Fkn waan akka jijjiirama immigration, karaa horii US baduu dhowwanii fi waan hedduu.”
Namii hedduun du’a isaatiif booha, Joon Makkeeyin ammoo haga qalloon keessa jirtu waan galateeffatu hedduu qaba
“Addunyaa tana irraa namii akka kiyya badhaadhe hin jiru. Faaydaa Amerikaatiif hojjadhe.”